Ikhaya / izesekeli / Izinto Zokugeza / Matte Black Single ithawula Hooks Indlu yangasese
Inqubo ye-Matte Black, Stylish and exquisite matte yenza umnikazi we-Towel hook abukeke emfashini futhi azizwe ekhululekile.AYikho ukuphela, ubufakazi obunamabala ekuxazululeni izigxivizo zeminwe nokuqongelela uthuli namafutha. KUPHELA hlanza ngendwangu ethambile, emanzi ngobumnene
I-Wall mount Matte Black Single Towel Hooks iyinhlanganisela ephelele yesimanjemanje, ebushelelezi futhi elula.it engayisebenzisela amakhethini tie backs. Alsowork kahle ehhovisi elenga amajazi, izikhwama, izambulela, njll. Ingwegwe isebenza kahle ngazo zombili izembatho namathawula.
Umzimba wonke wakhiwe ngensimbi engagqwali yohlobo lwe-304 ye-premium grade, ngokungeziwe okungu-18/10 okuqukethwe kweChromium / Nickel ukuvikela ukugqwala nokugqwala. 4 izendlalelo zokuvikela zengezwa ku-304 insimbi engagqwali ukuyenza iqine futhi i-Anti-Rust Engaphezulu
Ingwegwe emnyama eyodwa
Ihange elibonakalayo + ∅4 * 35mm isikulufa + hex key
SKU: 480106DB Categories: izesekeli, Izinto Zokugeza Tags: Izinto Zokugeza, izingwegwe zejazi, Wall Mount
I-WOWOW Pop Up Drain Assembly Stopper Emnyama